ချစ်ရအောင်: C++ Programming ( Lesson3)
C++ Programming ( Lesson3)
အားလုံးပဲ..မင်္ဂလာပါ။ ဟိုတနေ့က.. Lesson2က. homework ကို..ရကြလိမ့်မယ်လို့..ထင်ပါတယ်.။ အဖြေကိုလည်း.. comment box မှာ.ရေးထားပါတယ်.။ ဒီနေ့တော့.. သင်ခန်းစာတွေ.. ကျေညပ်သွားအောင်.. မေးခွန်းလေးတွေ.ထပ်ပေးမယ်နော်...။ ဖြေကြည့်လိုက်ကြဦးနော်..။
Que: Find the rectangle area. Formula >> Area = Length * Width
Find the circle area. Formula >> Area = 3.14* r * r
Find the triangle area. Formula >> Area = ( 1/2 ) * base * higth
Rectangle , circle, triangle တို့ရဲ့.. area ကို..ရှာကြည့်ကြပါနော်..။ လိုအပ်တဲ့.. formula တွေကိုလည်း ပေးထားပါတယ်.။ length တွေ width တွေကိုတော့.. ကြိုက်တာထည့်ပြီး.. ရေးကြည့်ကြပါနော်.. ^_^
အရင်တုန်းက.. စမ်းခဲ့ကြတဲ့.. ပုဒ်စာတွေမှာ.. input ကို. ကိန်းသေထည့်ခဲ့ကြပါတယ်..။ အခုဟာက.. input ကို. user ဆီက..တောင်းပြီးထည့်မှာပါ.။ input တောင်းမယ်ဆိုတော့. cin ကိုသုံးရမှာပေ့ါနော်..။
Que: Input two numbers from the keyboard and display their sum.
cout<<"Enteranumber for a:";
cout<<"Enteranumber for b:";
- အပေါ်ကအတိုင်း.. Turbo C မှာသွား Run ကြည့်ရအောင်နော်..။ ( C: or D:\_TC\_BIN\_TC.EXE )
- code တွေရေးပြီးသွား၇င်.. compile ( Alt+F9 ) လုပ်ကြည့်ပါ..။ အမှားရှိမရှိပါ..။
- အောက်ကအတိုင်း.. Error0, Warning0ဖြစ်ရင်.. Run ( Ctrl+F9 ) ကြည့်ရအောင်နော်..
- Run လိုက်ရင်.. screen အမည်းရောင်ကြီးတတ်လာပါလိမ့်မယ.်.။ cout<<"Enteranumber for a:"; cin>>a; လို့ရေးခဲ့လို့..aအတွက်.. တန်ဖိုးတောင်းပါလိမ့်မယ်.။ int (integer) လို့ပေးခဲ့လို့.. ကိန်းပြည့်တွေပဲထည့်လို့ရပါမယ်...။ ဒသမကိန်းတွေမရပါဘူး..။ Data Type တွေကိုလည်း.. Lesson2မှာ..ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ..။
-aရဲ့တန်ဖိုးထည့်ပြီး.. enter ခေါက်လိုက်ပါ..။
-bတန်ဖိုးဆက်တောင်းပါလိမ့်မယ်..။ ကိန်းတစ်ခုခုထည့်ပြီး.. enter ခေါက်လိုက်ပါ..။
- cout<<"sum="<<c; ဆိုတော့.. အ၇င်ဆုံး sum= ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်..။ အဲ့နောက်ကနေ.. c ရဲ့..ပေါင်းလဒ်ကို.. ဖော်ပြပေးပါတယ်..။aနဲ့bတန်ဖိုးထည့်ပြီး.. enter ခေါက်လိုက်ရင်.. အဖြေတန်းကျလာချင်မှကျပါတယ်.။ တကယ်လို့.. အမည်းရောင် screen ကြီးပျောက်သွား၇င်.. စိတ်မပူပါနဲ့..။ Window > User screen ကိုသွားလိုက်ပါ.။
- အမည်းရောင် screen နဲ့.. ခုန Run ခဲ့တဲ့.. ပုဒ်စာရဲ့အဖြေပါ.. ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
- အမည်းရောင် screen ပေါ်ကို.. တစ်ချက် click လိုက်ရင်.. Turbo C ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..။
ဒီလိုဆိုရင်.. user ဆီက.. input ကို..တောင်းတတ်မယ်လို့..ထင်ပါတယ်.. ^_^
အောက်က... ပုဒ်စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီး.. အပေါ်ဆုံးက ပုဒ်စာတွေကို..input ကို ကိန်းသေမဟုတ်ပဲ.. user ဆီက input တောင်းပြီး.. ပြန်ပြင်ရေးကြည့်ကြပါနော်....
Que: Input Degree Fahrenheit and display the corresponding degree Celsius.
float tf , tc;
cout<<"Enter degree Fahrenheit ";
tc = 5.0/9.0 ( tf - 32.0 );
cout<<"Degree Celsius is:"<<tc;
- အဖြေကို..ရှင်းပြပါ့မယ်..။ Run တာကိုတော့..မပြောတော့ပါဘူး.. ကိုယ်တိုင် Run ကြည့်ကြနော်..။
- float tf , tc ; လို့ ဘာလို့ပေးခဲ့တာလဲဆိုရင်. Fahrenheit ရဲ့.တန်ဖိုးဟာ.. အမြဲတမ်း ကိန်းပြည့်နဲ့ပဲ.. လာမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ။ ဒသမကိန်းလည်းပါနိုင်ပါတယ်.. ။ ဥပမာ.. 2.33 degree Fahrenheit
- formula မှာ.. tc = 5.0/9.0 ( tf - 32 ); ဆိုတာကြောင့်.. tf က float ဆိုရင်.. တခြားဟာတွေက.. integer ဖြစ်လို့မရပါဘူး..။ မျိုးတူမှ.. ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စား လုပ်လို့ရတာပါ..။ အဲ့ဒါကြောင့်.. tc ကိုပါ. float ပေးခဲ့တာပါ..။
- 5.0 , 9.0 လို့..ပေးတာကလည်း. float ပုံစံဝင်အောင်. ဒသမကိန်းပုံစံဖြစ်အောင်ပေးထားတာပါ..။ 5/9 လို့သာပေးခဲ့ရင်.. integer ဖြစ်သွားပြီး.. တခြားဟာတွေနဲ့.. မြှောက်လို့.. နှုတ်လို့မရပါဘူး..။
- ဒီလိုဆိုရင်.. program တစ်ပုဒ်မှာ integerပေးသင့်လား...။ float ပေးသင့်လား. သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်...။
အားလုံးပဲ..အပေါ်က..ပုဒ်စာတွေကိုကြိုးစားကြည့်ကြပါနော်..။ အဖြေကို...နောက်နေ့.. comment box မှာချန်ခဲ့ပေးပါ့မယ်.။ တကယ်လို့.. နားမလည်တာ. မရှင်းတာ.ရှိရင်လည်း... comment box ဒါမှမဟုတ်.. ညီမရဲ့.. facebook စာမျက်နှာပါ.. စာချန်ခဲ့လို့ရပါတယ်..။ (www.facebook.com/suyatanar86)